Daa'ima dahoo yeroo dha qophahe techee jirtu. Naannoo Somalee bakka ongeedhan rukkutamee , Amajii 26, 2016
Embaasii Jaappaan kan Finfinnee jiru keessatti deggersa kana kan labsan Itiyoopiyaatti ambaasaaddera biyyattii Kazu-Hiiroo Suuuzukii turan.
Maallaqi Itiyoopiyaaf ramadames kan biyyi isaanii gaanfa Afriikaaf maallaqa kennite keessaa ta’uu ambasaderichi beeksisaniiru.
Itiyoopiyaa qofaa utuu hin taane naannoon sun martinuu deggersa namoomaa yeroo hatattamaa isa barbaachisa. Japan biyyoota gaanfa Afriikaaf deggersi walii galaa isheen kennitu doolaarii miliyoona 125 yoo ta’u kana keessaa Itiyoopiyaaf kan kennamu doolaarii miliyoona 30.1 jedhan.
Maallaqi hafe biyyoota naannoo kanneen biroo jechuunis Sudan kibbaa, Sudaanii fi Somaaliyaaf kan ramadame ta’uu ambaasaaddrichi ibsaniiru. Itiyoopiyaaf kan kennamu doolaarii miliyoona 30 keessaa doolaarii miliyoonni 8.4 kallattiin honge mudateef deebii kennuuf kan oolu ennaa ta’u kan hafe immoo sagantaalee adda addaa qonnaan bulaa deggeraniif oola. Naannoo Somalee fi Gambeelaa keessatti sabatiinsa uummataa, gargaarsa namoomaa fi sagantaalee jireenya uummataa fooyyessuuf kan ramadame irra jireessa maallaqa kanaa ti. Hongee Itiyoopiyaa mudateen uummati miliyoonni 10.2 gargaarsi yeroo hatattamaa akka isaan barbaachisu beekamaa dha.
Kana kan yaadachiisan Ityoopiyaatti directorri sagantaa nyaataa addunyaa Johan Ayliif maallaqi barbaadamu yeroon hin ga’u taanaan rakkoon beela irra hammaatu mudachuu akka danda’u akeekkachiisaniiru.
Kan hedduu na yaaddessu lakkoobsa uummata beelaaf saaxilamee jiruuf hanqina maallaqaa nuti qabnu walitti idaa’amee, maallaqi jiru dhumnaan walakkeessa bara 2016tti haalli uumamu suukaneessaa ta’uuf jira jedhan.
Fedhii uummata Itiyoopiyaa gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan waggaa tokkoof guutuuf doolaarri biliyoonni 1.4 akka barbaachisu galmeen gaaffii gargaarsaa namoomaa sun ni agarsiisa. Kana keessaa doolaara miliyoona 700 kan ta’u hin argamin jiraachuu tokkkummaan mootummootaa beeksiseera.